Blockchain News 14.09.2018 - Blockchain News
Gunyana 14, 2018 arun
Hong Kong mutengesi otaura blockchain Anwendung nokuda madhaimani Tracking
A vaitungamirira Hong Kong zvishongo retailer, Chow Tai Fook, akaita partnered pamwe Gemological Institute of America, munhu asiri purofiti tsvakurudzo indasitiri muviri, kusika munhu App blockchain anotsanangura hunozovabatsira vatengi kuziva kwakabva uye nderechokwadi mabwe yakatengwa. budiriro iyi kunounza blockchain Implementation kurongedza pedyo dzose vanhu achishandisa nyore User inowanikwa, ari Anwendung.
Kusuma yaizivikanwa avhenyu nguva dzose vanoshandisa kuwana mabasa akadaro zvechokwadi inoratidza kufambira kune mhinduro yechigarire. Izvi atange Chow Tai Fook vachaona mangoda inotengeswa yayo T Mark-vakapiswa zvitoro "graded" nokuti makasitoma, nokuda anoremekedzwa Gemological Institute of America. Kukwanisa kuratidza mavambo uye nderechokwadi chinhu zvirokwazvo anotanga indasitiri kuti nguva "mhepo yakachena", uye kuita mabasa akadai nyore Via yaizivikanwa User interfaces sezvinoita Anwendung zvechokwadi akakura danho nokuda indasitiri.
Ber co-muvambi kuti crypto zvokutengeserana pachikuva anotangazve zvechechi brokerage
Voyager, ari cryptocurrency zvokutengeserana pachikuva akasikwa Über yokutanga CTO uye aimbova E * Trade Executive, akaita yakatanga itsva brokerage weboka akagadzirirwa zvakananga kuti masangano vanoita. Voyager Zvechechi brokerage ndehwokuti vazopa "yakanakisisa-mu-kirasi crypto zvokutengeserana mhinduro" kune huru yemakambani kutsvaka kuchinjanisa cryptocurrencies, EG. ruzhowa mari, kutenga-divi yemakambani, uye musika Vagadziri. The brokerage yava kuti nokuparura pakupera kwegore pamberi.
"Kuwedzera chipo chedu uye leveraging kwezvivako kwedu zvinosanganisira zvechechi vomunharaunda yaiva nguva dzose chikamu chedu-yakareba zvine urongwa roadmap,"Akadaro Stephen Ehrlich, CEO pamusoro Voyager uye vaimbova Executive panguva E * Trade. CIO Glenn Barber akati "chinangwa chedu kuunza padanho kuwana, connectivity uye utsanzi kuti masangano vanoita, zvikuru sei, vari kutsvaka kuti zvinobudirira kubatanidzwa crypto zvokutengeserana.”
Kraken Daily Market Mushumo 13.09.2018
$178M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
pamusoro 15 Must Know Crypto & ...
Gunyana 18, 2018 pa 9:47 PM